Shina vita amin'ny hazo vita amin'ny volotara mainty vita any Chine ho an'ny orinasa sy mpamatsy ny menaka diffuser | Hoyer
Zavamaniry varahina mainty vita amin'ny laoniny ho an'ny setrin'ny menaka diffuser
Ny roed diffuser sticks dia misy hazo rattan sy hazo be menaka, ho an'ny fitaovana fibre, afaka misafidy ny loko tianao ianao, ary tsy ho voapetaka. Mametraka kitapo 120pcs ho kitapo iray, izay mety ho ampy amin'ny fangatahan'ny ankohonanao ianao, azonao atao ny mampiasa azy ireo hanoloana ny hazo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, birao, tsena, efitra fandroana, efitrano fandroana ary efitra fatoriana, na aiza na aiza tianao.
Size: 3 * 250mm
Color: fotsy, mainty na araka izay takianao
MOQ: 50,000pcs, latsaky ny habeny azo ekena koa raha manana tahiry isika
Ny tombony: ny tehina volotara dia mahasalama ho an'ny fampiasana isan'andro izay afaka mamoaka ny fofon'ny menaka mba hahatonga ny rivotra tsy ho ela. Dia fanomezana be dia be ho an'ny fotoana maro toy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fampakaram-bady, Noely, Taom-baovao ary trano mafana.
Habe: Lava 25cm (8 santimetatra), savaivony 3mm na 5mm, na izay mety ho anjaranao voatokana.
Fampiasana: Mametraka tehina rattan na hazo be menaka fotsiny ao anaty tavoahangy diffuser, ary arotsaho menaka na diffuser menaka ihany koa, ny tsatoka dia handrehitra ny menaka tsikelikely ary avy eo dia hitondra ny fofona ho amin'ny rivotra amin'ny fotoana. Tsy haingon-trano tokana any an-trano izy io, ary afaka manampy ihany koa ny manala ny tsirony vahiny sy ny kalitao amin'ny rivotra.
HANOMPOANA MANOKANA NY FIVORIANA - Hanolotra ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay ianao, afaka mahazo antoka 100% avy amin'ny orinasanay. Raha mahita izay tsy mahafa-po anao ianao, azafady mba hifandraisa aminay ary hiezaka izahay handamina izany, ataovy hampandeha tsara.
Color White, mainty ny fanontana na ny loko namboarina dia azo ekena ihany koa
MOQ 50,000pcs Tsy ampy ny habetsahana ekena koa raha manana tahiry isika
Previous: Mahavariana Sola voninkazo am-borona vita amin'ny voninkazo noho ny menaka manitra
Manaraka: Sticks diffuser Stefaner Rosiana kalitao avo indrindra
tavoahangy diffuser tavoahangy
tavoahangy diffuser feno siny